Apple dia manana vokatra amidy ao amin'ny fivarotany miaraka amin'ny teknolojia AirPort | Avy amin'ny mac aho
Herintaona izao taorian'ny nandravana ny Ekipa injenieran'ny Apple Mpitantana AirPort. Etsy ankilany, zava-dehibe ny manamarika fa manana taratasy miafina ao anaty satroka foana i Apple mandritra ny fotoana voafaritra manokana ary nahita izany tamin'ny fahatongavan'ny iray izahay fanavaozana ny tobin'ny AirPort rehefa ny lesoka fiarovana KRACK, fanavaozana izay tsy nantenain'ny olona ary tonga ihany tamin'ny farany.
Lojika ny mieritreritra fa ny AirPorts an'ny orinasa dia efa ao anatin'ny fihenan'ny fihodinana ary raha tsy misy vaovao dia ho hitantsika ny fiovana vitsivitsy amin'ireo, saingy mazava ho azy, ny teknolojia napetrak'ireto router ireto dia tsy "nariana" ary ny sasany ny mpanamboatra antoko fahatelo dia mivarotra vokatra mitovy amin'izany amin'ny Famaritana AirPort an'i Apple miaraka amin'ity haitao ity.
Toy izany ny tranga na dia ny salantsalany fanta-daza 9To5Mac aza nanontany an'i Apple tenany hoe inona no tsy nety ny fampiharana AirPort Utility izay namboarina ho an'ny modely iPhone vaovao aza, ny iPhone X ary mazava ny valiny:
Tian'ny olona ny vokatra AirPort, ka hanohy hivarotra ireo vokatra ireo izahay. Zava-dehibe ny fifandraisana ao an-trano (ary ankehitriny miaraka amin'ny tsindrin'ny HomeKit) noho izany dia tianay ny hanome ny mpampiasa fitaovana ilaina hampiasana ny tranon'izy ireo ho milamina kokoa sy hifandray tanteraka.
Tsy lazaina intsony fa Apple dia maniry ny hahafahan'ireo mpampiasa mankafy ny tontolo iainana manontolo ny marika miaraka amin'ireo fitaovana sy vokatra rehetra an'ny orinasa Linksys, izy ireo no ho lohalaharana hifandray amin'ny AirPort sy Time Capsule. Na dia tsy amin'ny fomba mivantana aza dia misy ny AirPorts an'ny Apple any amin'ny magazay ny marika ary na dia marina aza ny fomba fampifandraisana amin'ny tambajotra dia niova be rehefa mandeha ny fotoana - ho tsara kokoa - tsara ny manana ireo safidy ireo ho an'ny mpampiasa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple dia manana vokatra amidy ao amin'ny fivarotany miaraka amin'ny teknolojia AirPort